Nexus 6P Vs Nexus 6 | Akụkọ akụrụngwa
Nexus 6P Vs Nexus 6, mgbanwe nke Google phablet ezuola?
Naanị ụnyaahụ Google na eze gosipụtara ọhụụ Nexus ọhụrụ ya, emere ya aha Nexus 5X y Nexus 6P. Ọ bụrụ n'ụtụtụ a anyị na-etinye ihu na ihu na Nexus 5 mbụ, nke nwetara nnukwu ọganiihu ahịa na Nexus 5P ọhụrụ nke ahụ na-enye anyị mmelite na ọrụ ọhụụ, mana ikekwe ọ bụghị ọtụtụ ka ọtụtụ n'ime anyị tụrụ anya ya, ugbu a bụ uzo iche Nexus 6 mbụ na Nexus 6P ọhụrụ arụpụtara site na Huawei.
N'adịghị ka Nexus 5P, Nexus 6 ahụ enwebeghị otu onye nrụpụta, yabụ anyị nwere ike ikwu na esemokwu dị iche iche adịlarị oke na nhazi ahụ, agbanyeghị na ọ dị mwute na anyị ga-ahụ ọtụtụ myirịta karịa ndịiche. Site ugbu a gaa n'ihu anyị nwere ike ịgwa gị na anyị tụrụ anya ihe karịa na Nexus 6P a na ọ bụ na na njedebe anyị nwere ike ịsị na anyị na-eche ihu na obere peji na akụkụ ụfọdụ gbasara Nexus 6 mbụ.
Nke mbụ, anyị ga-enyocha isi njirimara na nkọwa nke Nexus 6 mbụ na Nexus 6P ọhụrụ, nke Huawei rụpụtara.
1 Nexus 6 Njirimara na nkọwa
2 Nexus 6P Atụmatụ na nkọwa
3 Mmezi hardware
4 Android 6.0 Marshmallow, nnukwu ihe dị iche
5 Obere nkọwa bụ isi ihe dị na Nexus 6P a
Nexus 6 Njirimara na nkọwa
Ihuenyo: 5,96 sentimita asatọ AMOLED na mkpebi nke 2560 × 1440 pikselụ
Processor: Qualcomm Snapdragon 805 na Adreno 420
Nchekwa dị n'ime: 32 ma ọ bụ 64 GB
Ese foto: 13 megapixels na azụ na 2 megapixels n'ihu
Njikọta: Wi-Fi a / b / g / n / ac, Bluetooth 4.1, GPS, NFC, microUSB 2.0
Ndị ọzọ: Nguzogide mmiri, Ikuku na-akwụ ụgwọ
Sistemụ nrụọrụ: Android 6.0
Nexus 6P Atụmatụ na nkọwa
Ihuenyo: 5,7 sentimita asatọ AMOLED na mkpebi nke 2560 × 1440 pikselụ
Processor: Qualcomm Snapdragon 810 v2.1 na Adreno 430
Nchekwa dị n'ime: 32, 64 ma ọ bụ 128 GB
Ese foto: 12,3 megapixel f / 2.0 azụ na 8 megapixel n'ihu
Njikọta: Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC, USB Type-C
Ndị ọzọ: Mkpịsị aka na-agụ
Mgbe anyị lechara isi atụmatụ na nkọwa nke Nexus 6P ọhụrụ a anyị nwere ike ikwu na Huawei emezila ngwaike maka Nexus 6, nke anyị nwere ike ịsị na ọ bụ nke ziri ezi, ma na-enweghị oké ofufe. Ihe omuma ndi ozo jiri ya tụnyere Nexus 6 di ole na ole na agbanyeghi na ihuenyo, ihe nhazi na RAM di elu, Google na onye mmeputa nke China enwekwaghị ohere iji mepụta smartphone dị ike ma dị egwu.
Kedu ihe na-akụda, ma ọ dịkarịa ala na ọnụ ọgụgụ, bụ igwefoto azụ, onye Sony mepụtara oghere ya ma nye anyị 12 megapixels, nke dị anya site na ọtụtụ ngwaọrụ mkpanaka na anyị nwere ike ịchọta ugbu a n'ahịa. N'ezie, site na ihe anyị hụrụ na foto mbu esere na Nexus 6P a, nsonaazụ ya dị mma, ọ bụ ezie na ọ nwere ike ọ ka mma karịa ihe anyị nwere na mbụ Nexus 6.
Na nchịkọta, anyị nwere ike ikwu na ngwaike akụrụngwa adịwanye obere na ọ ka njọ kemgbe megapixels nke nwayọ nwayọ nke mbụ Nexus 6 dị elu karịa nke Nexus 6P.
Android 6.0 Marshmallow, nnukwu ihe dị iche
Ozugbo anyị doro anya na Nexus 6 na Nexus 6P bụ ngwaọrụ abụọ dị iche iche, mana ha yiri nke ahụ mgbe ha mechara, anyị ga-anwa ịchọta ebe dị iche n'etiti ha. O doro anya na achọtara nke a na sistemụ arụmọrụ ya na ọ bụ na enweghị na mbụ Nexus 6 anyị hụrụ gam akporo Lollipop dị ka sistemụ arụmọrụ na Huawei Nexus ọhụrụ a anyị chọtara ọhụrụ Android 6.0 Marshmallow.
Gam akporo Lollipop nyere ndị ọrụ nke Nexus 6 ọtụtụ nsogbu, dịka ọmụmaatụ gbasara nnwere onwe nke batrị ahụ, nke mere ka ọ bụrụ ọdịda, na njikọ chiri anya na uto nke ọnụ na nha na oke mmụba ọnụahịa. Na mbata nke gam akporo 6.0 ọhụrụ Google nwere olile anya idozi ọtụtụ nsogbu nke gam akporo 5.0 na nke a na-eme ka Nexus 6P ọhụrụ bụrụ otu n'ime kpakpando ngwaọrụ na ahịa.
Obere nkọwa bụ isi ihe dị na Nexus 6P a
Nexus 6P adịghị iche na nke mbụ Nexus 6 dị ka anyị na-ekwu n'isiokwu ahụ, mana enwere obere nkọwa na n'ikpeazụ mee ka njedebe abụọ a dị iche. Tụkwasị na nke a, nkọwa ndị a ga-abụ ndị na-eme ihe ọjọọ, na-enweghị obi abụọ, na ọtụtụ ndị ọrụ na-emesị nweta ọdụ ọhụrụ a.
Otu n'ime nkọwa ndị ahụ bụ Ọdụ USB Type-C, nke bụ enweghị obi abụọ ọdịnihu na ọ bụ ezie na n'oge ọ nwere ọtụtụ omume ọma dị ka ntụpọ, Google chọrọ imejuputa ya na Nexus ọhụrụ a iji nye ihe na-adọrọ mmasị ndị ọrụ.
El akara mkpisiaka, nke anyị hụwororịrị n'ọtụtụ ọdụ ndị ọzọ bụ akụkụ ọzọ dị iche iche nke Nexus 6P a. O di nwute na enwekwara obere nkowa nke anyi na-agbaghara nke ukwuu dika ikuku ikuku ma obu iguzogide mmiri.
N’ikwu eziokwu, anyị ga-ekwu na mmeghari ohuru nke Nexus 6 maka Nexus 6P a bụ eziokwu, mana n’enweghi nchekwube ebe ọ bụ na ikekwe anyị niile tụrụ anya na ihe ọzọ nke mechara yie ka Google na Hauwei kpebiri ịchekwa maka ngwaọrụ ndị dị n’ihu.
A sị na m ga-ekwu echiche nke m, Echere m na Google enwebeghị ike ime ka m kwenye dị ka onye ọrụ Nexus 6 iji mee ka ọ dị ọhụrụ. Nexus 6 mbụ riri m nnukwu ego na ozi ọma na ọdụ ọhụrụ ahụ ga-ewetara m dị ole na ole, ọ bụ ezie na ekwenyesiri m ike na Nexus ọhụrụ a ga-enye ọtụtụ egwuregwu na ahịa yana ọ ga-apụta ngwa ngwa. n'ahịa zuru ụwa ọnụ.
Donye ka i chere bụ onye mmeri nke duel a na anyanwụ n’etiti Nexus 6 mbụ na Nexus 6P ọhụrụ a?. Can nwere ike inye anyị echiche gị gbasara ya na oghere edebere maka ikwu na post a ma ọ bụ site na netwọkụ mmekọrịta anyị nọ ugbu a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Nexus 6P Vs Nexus 6, mgbanwe nke Google phablet ezuola?
Nsogbu bụ na rue ugbu a enweghị teknụzụ (opekata mpe na ndị nhazi na eserese) dị elu karịa ihe enwere ike ịzụta, ọ bụrụ na ọ bụghị Snapdragon 810 ọ bụ 808 nke G4 nwere, enwere ike ịme ya site na imewe na ha abụọ na-erite uru nke gam akporo 6.0 na ngwaike a. Ma ọ bụghị ya, ahụrụ m ya nke ọma, ihe na-ewute m bụ na ọtụtụ na-ahapụ ncheta mpụga.
Nexus 5X Vs Nexus 5, ugbu a na gara aga nke Google